Author Topic: QATAR!!! (Read 5422 times)
« on: April 18, 2008, 10:23:41 PM »
waxan jecleestay in aan ogaado qofkasta ra'yigiisa ku adan arintan.
sida laga warqabo dagaladi sukeeyay kadib inbadan oo somalida kamid ah waxa ay u hajireen wadamada carabta yurub iyo america waxana soo baxay jiil cusub oo la hana qaday hadba meesha uu ku dhashay.
marka inbadn oo naga mid ah waxa uu medicneka ka bartaa ama ka bartay wadamo badan oo calamka ah ha ku kala duwanadaan luqadaha. waxa jira arday badan oo somali ah oo dhigta medicine lakiin aan aqoon u lahayn Afka Somaliga qaarna iska qajajacsanaayo iyago somaliga bar english ama Arabic ku darayo hadba mesha uu kusoo koray.
su'asha waxa ay tahay
-Qatar intee la eg ayay ku yeelanaysa dhakhatirtas marka bari ay u shaqo tagan isbitalada dalkena hooyo?(yacni marka u la tacamulaayo Bukankiisa)
-maxa u aragta in uu xalka ku jiro?
« Reply #1 on: April 20, 2008, 07:29:34 AM »
Walaal munim su'aashaadu waa mid muhiim ah, anigu waxay ila tahay in wax qatar ah aysan laheyn arintaan, si sahlanina uga shaqeysan karaan wadankooda hooyo, maxaa yeelay hadaba waxaa jira dhakhaatiir badan oo qalaad oo la yimid hay'ado kala duwan oo somaliya ka shaqeeya bukaanada qaabila, wareysta, wiisiteeya, daawane u qora, waxayna sidan ku dhacday iyagoo adeegsada tarjubaano loo tababaray arintaas.
Marka qofkii u dhashay way uga sahlanaan badantahay qof aan u dhalan, xaga is fahanka bukaanka iyo la xiriirka bulshada.
« Reply #2 on: April 20, 2008, 07:50:34 PM »
Thanks Bro Pharmacist jawabtaada, aniga ujeedadeeda waxa ay aheed in marwalbo laga fiicanyahay dhakhtarka somaliga ah oo awood u leh in uu barto luqadiisa hooyo in uu bari isticmaalo tarjumaan isagoo jooga somalia, sax way jiraan dhakhatir ajnabi ah oo ka shaqeya somalia wadna sad u shegtay oo tarjuman ayay leyihiin tasna danta aya nagu kaliftay.
yacni aniga waxan arkay arday dhigata medicine oo somali ah awoodikara in u ku hadlo xoga somali ah haba iska jajabsado lakin aan rabin inuu wanajiyo ku hadalka afkiisa hooyo marka ad waydiisana bari sidee wadanka uga shaqeenaysa waxa uu kugu jawabaya maba usocdo somaliyada ad sheegaysid oo dalka an qurbaha ka jogo ayan shaqo ka radsanaa taasna waa QATAR sida aan filayo...!!!!
« Reply #3 on: April 23, 2008, 03:08:44 AM »
Quote from: Munim on April 20, 2008, 07:50:34 PM
marka ad waydiisana bari sidee wadanka uga shaqeenaysa waxa uu kugu jawabaya maba usocdo somaliyada ad sheegaysid oo dalka an qurbaha ka jogo ayan shaqo ka radsanaa taasna waa QATAR sida aan filayo...!!!!
Saxiib Munim, qof sidaa u jawaabaya, in aad la doodo maba ahan, maxaa yeelay waxaa somalida wax u qaban karo qof ay daacad ka tahay oo ujeedooyinka uu wax u bartay ay ka mid tahay in umaddiisa wax u qabto.
Lakin waxaad ogaataa ugu dambeystii meesha qof waliba u dambeyn doonta waa halkii uu ka soo jeeday.
Hadii aan u soo laabto su'aashaada waa arin fiican oo ay waajib tahay in uu qofka ka sii fakaro hadii qorshihiisa ay ka mid tahay maalin maalmaha ka mid ah inuu wadankiisa ku soo laabto dadkiisane wax u taro.
Intaa ayaan dhihi lahaa
« Reply #4 on: April 23, 2008, 08:17:41 PM »
Thanks Bro waxbaro for your good Comment.
Views: 5915 June 17, 2015, 11:15:58 PM
Su'aal: Sokorowga iyo Dhiigkarka keebaa qatar badan?
Started by LibandheereBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4212 September 19, 2015, 01:34:40 PM
Study Medicine in Qatar
Started by AdminBoard I want to Study Medicine
Views: 9700 July 01, 2010, 08:19:23 PM
by Mahamed Kayse